Kodzero-dzevanhu, 12 Chikumi 2019
Chitatu 12 Chikumi 2019
Chikumi 12, 2019
Apostle Talent Chiwenga Vokuvara muNjodzi yeMumugwagwa Yauraya Vanhu Vatatu
Bepanhau reHerald rinoti Apostle Talent Chiwenga vaita njodzi yemumugwagwa iyo yauraya mudzimai wavo mumugwagwa weHarare-Masvingo pedyo neChartsworth.
Glen View South Yoonekana naAmai Vimbai Tsvangirai Java
Vagari vemuGlen View South vanoti kushayika kwakaita nhengo yanga ichimirira nzvimbo yavo muparamende, Amai Vimbai Tsvangirai Java, kwasiya gwanza richanetsa kuvhara.
Global Fund Inogona Kutadza Kubatsira Zimbabwe neNyaya yeChikwereti
Mutauriri weparamende, Advocate Jacob Mudenda, vanoti hurumende inofanira kubhadhara mari yaiiri kufanirwa kubhadhara kuGlobal Fund kuti nyika iwane rubatsiro rwemamamiriyoni mazana mana emadhora kubva kusangano iri ezvirongwa zvehutano zvakanangana neHIV, rurindi nemalaria.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvove neMaonero Akasiyana paNyaya yeDual Citizenship
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachimirira Makonde muparamende, VaKindness Paradza veZanu PF, vanoti kutanga mwedzi unouya vachange vachitenderera vachisangana nevana veZimbabwe vachivapa magwaro aya.
VekuAfrica Vanotsvaka Hupoteri Vavekuwanda Kumuganhu weAmerica neMexico
VekuAfrica Vanotsvaka Hupoteri Vavekuwanda Kumuganhu weAmerica neMexicoBazi rinoona nezvekuchengetedzwa gwemiganhu, re US Customs and Border Protection Agency, rati musvondo rekutanga remwedzi uno, vanhu veku Africa vakasungwa pamuganhu we America ne Mexico vanopfuura mazana mashanu.
Amai Vimbai Tsvangirai Java vacharadzikwa neChina KuGlen Forest muHarare
Amai Vimbai Tsvangirai Java, avo vakashaya nemusi weMuvhuro, vacharadzikwa mangwana, China, kumakuva eku Glen Forest, ku Borrowdale, muHarare.
Vechidiki veMDC Voronga Kuratidzira Mwedzi Uno Wose
Vechidiki veMDC vanoti vari kuronga kuratidzira mwedzi uno wose nekusafara nemamiriro ezvinhu munyaya dzezvehupfumi.
Amai Vimbai Tsvangirai Java Voradzikwa muHarare neMusi weChina
Amai Vimbayi Tsvangirai Java, mwanasikana wamuchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakashaya kuchipatara cheWest End Clinic muHarare nemusi weChitatu vave kutarisirwa kuvigwa nemusi weChina kuGlen Forest Memorial Park muHarare.
Vamwe Vakatora Mapurazi Vodzingwa neHurumende
Hurumende iri kudzinga vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatuvakaazvigarisa patsva mumapurazi pakati pa2005 kusvika parizvino ichiti vanofanira kudzokera kwavakabva.
Vanorojesa Dzimba kuVictoria Falls Vave Kubhadharisa Nemadhora EkuAmerica
Vanedzimba dzekurojesa muVictoria Falls vanonzi vave kuda kubhadharwa nemadhora eku America, kwete nemari yemu Zimbabwe.
Mhuri yeMDC Yobatana Kuchema Amai Vimbai Tsvangirai Java
Mumiriri weGlen View South mudare reparamende vari nhengo yeMDC Amai Vimbai Tsvangirai Java avo vakaita njodzi yemumugwagwa muna Chivabvu vashaya muchipatara cheWest End muHarare.